WEYER UMHLABA - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
1999 inkampani yasungulwa
2003 Uhlelo oluqinisekisiwe lwe-ISO9001 Management Management
2005 Ama-laboratories asunguliwe esikhathi samanje futhi asezingeni eliphakeme
2008 Imikhiqizo yethu idlule i-UL, CE
2009 Inani lokuthengisa lonyaka lidlule izigidi eziyi-100 ze-CNY okokuqala ngqa
2013 Kwethulwa iSAP System, inkampani yangena enkathini entsha yokuphathwa kohlelo
2014 Umklomelo webhizinisi lobuchwepheshe obuphakeme kanye nemikhiqizo yomkhiqizo odumile
2015 Kutholwe isitifiketi se-IATF16949 System; iwine isihloko se- "Shanghai Brand Famous" ne "Small Technological Giant"
2016 Kwaqedwa ukwenziwa kabusha kwamasheya nezinhlelo zokufakwa ohlwini. I-Weyer Precision Technology (Shanghai) Co, Ltd. yasungulwa.
2017 Igungu Lempucuko LaseShanghai Eliklonyelisiwe; Imikhiqizo yethu ibiphase i-ATEX ne-IECEX
2018 Isitifiketi Somphakathi Wokuhlukaniswa Kwe-DNV.GL; I-Weyer Precision yaqala ukusebenza
2019 Iminyaka engu-20 yokugubha usuku lwe-WEYER
Isungulwe ngo-1999, iShanghai Weyer Electric Co., Ltd.yibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu obukhiqiza ukukhiqizwa kwezindlala zekhebula, ukufakwa kweshubhu kanye neshubhu, amaketanga ekhebula nezixhumi ze-plug-in. Singabahlinzeki besixazululo sohlelo lokuvikela ikhebula, esivikela izintambo emikhakheni efana nezimoto zamandla amasha, ujantshi, imishini ye-aerospace, amarobhothi, imishini yokukhiqiza amandla omoya, imishini yokusebenza, imishini yokwakha, ukufakwa kukagesi, ukukhanyisa, amakheshi, njll. Okuhlangenwe nakho kweminyaka engu-20 kohlelo lokuvikela ikhebula, u-WEYER uzuze idumela elivela kumakhasimende nabasebenzisi bokugcina ekhaya nakwamanye amazwe.
Ikhwalithi iyinto ebalulekile kwifilosofi yenkampani ye-WEYER. Sineqembu elisebenza kahle lokuphatha ikhwalithi elihlola njalo nangokungahleliwe imikhiqizo elabhorethri yethu yomhlaba jikelele. Siqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo yethu ngaphansi kokusebenzisa okujwayelekile futhi sinikezela ngokushesha ngemuva kwensizakalo yokulondolozwa kwemikhiqizo. Ukuphathwa kwethu kwekhwalithi kuqinisekisiwe ngokuya nge-ISO9001 & IATF16949.
Ubuchwepheshe buhola emisha. Siyaqhubeka nokuthuthukisa nokutshala imali, ukukhiqiza okusha, umshini nobuchwepheshe. Sineqembu eliqinile le-R & D lokwakha izixazululo ezintsha zokwakha ukusiza abasebenzisi bokugcina ukuvikela amakhebuli ukuphepha nokwengeza izinzuzo kwezomnotho. Siphinde sibe nochwepheshe isikhunta iqembu lokuthuthukisa isikhunta isakhiwo sethu sisebenzisa isikhunta ubuchwepheshe bamuva bokuthuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo nokunciphisa izindleko zayo.
UWeyer unomqondo wensizakalo ephezulu: zama ngakho konke okusemandleni ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo ezihlukanisiwe, zokubeka uphawu nezokushesha. UWeyer uhlala enikeza isisombululo esihle kakhulu sephrojekthi yokwenza uhlelo oluhle lokuvikela. UWeyer uhlala eletha ngesikhathi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. I-Weyer ihlale inikela ngokusezingeni ngemuva kwensiza yokufaka nokunakekela.
1. Umshini Wokujova
2. Isikhungo Sokuphakela Izinto
3. Umshini Wokucutshungulwa Kwensimbi
4. Isikhunta Machine
6. Indawo Yokugcina 2